China Cryogen medium medium oxygen oxygen gas plant Liquid Nitrogen Plant orinasa mpamokatra sy mpamatsy | OR
Fambolena entona oksizenina ranon-tsolika cryogenika zavamaniry nitroka ranoka
1.Simple fametrahana sy fikojakojana noho ny modular endrika sy ny fananganana.
2. Rafitra mandeha ho azy ho an'ny asa tsotra sy azo antoka.
3. Azo antoka ny fananana entona indostrialy madio madio.
4. Antoka amin'ny fisian'ny vokatra amin'ny dingana ranoka hotehirizina ampiasaina mandritra ny asa fikojakojana.
5.Fihinana angovo ambany.
6.Fandefasana fotoana fohy.
Ny fitsipiky ny famolavolana an'ity zavamaniry ity dia mifototra amin'ny teboka samihafa amin'ny etona tsirairay amin'ny rivotra. Ny rivotra dia voahidy, namboarina ary nesorina ny H2O sy ny CO2, avy eo hampangatsiaka azy ao amin'ny exchanger hafanana lehibe mandra-pisotroana azy. Aorian'ny fanitsiana, azo angonina ny oxygen sy ny azota famokarana.
Ity zavamaniry ity dia fanadiovana ny rivotra MS amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fizotran'ny turbine. Zavamaniry fampisarahana rivotra mahazatra izy io, izay mandray ny famenoana sy fanitsiana zavatra feno ho an'ny fanaovana argon.
Ny rivotra madio dia mandeha amin'ny sivana rivotra amin'ny fanesorana ny vovoka sy ny fahalotoan'ny mekanika ary miditra amin'ny compressor turbine izay misy ny rivotra voafataka ho 0,59MPaA. Avy eo dia miditra amin'ny rafitra fanamafisana ny rivotra izy, izay ampangatsiahina hatramin'ny 17 ℃ ny rivotra. Aorian'izany dia mikoriana mankany amin'ny tanky mpampiely sivana 2 ny molekiola, izay mihodina indray, mba hialana amin'ny H2O, CO2 ary C2H2.
Aorian'ny fanadiovana azy dia mifangaro amin'ny rivotra miverina mihombo ny rivotra. Avy eo dia ateraky ny compresseur afovoany afovoany hizara roa ony. Ny ampahany iray dia mankany amin'ny mpanova hafanana lehibe hampangatsiatsiaka ny -260K, ary atsoka avy eo amin'ny afovoan'ny mpanova hafanana lehibe hidirana amin'ny turbine fanitarana. Ny rivotra miitatra dia miverina amin'ny mpanondrana hafanana lehibe hamerenana aorina, aorian'izay dia mikoriana amin'ny compressor izay manatsara ny rivotra. Ny ampahany amin'ny rivotra kosa dia entin'ny fampiroboroboana ny hafanana avo lenta, aorian'ny fihenan'ny rivotra, dia mivezivezy mankany amin'ny fisondrotan'ny mari-pana izy io. Avy eo dia mankamin'ny boaty mangatsiaka izy hampangatsiaka ny ~ 170K. Ny ampahany amin'izy io dia mbola hangatsiaka, ary mikoriana mankany amin'ny farany ambany amin'ny tsanganana ambany amin'ny alàlan'ny mpanova hafanana. Ary ny rivotra hafa dia entina mba halaim-panahy ambany. expander. Aorian'ny fanitarana dia mizara roa. Ny ampahany iray dia mankany amin'ny farany ambany amin'ny tsanganana ambany ho an'ny fanitsiana, ny ambiny miverina amin'ny mpanondrana hafanana lehibe, avy eo mikoriana mankany amin'ny booster rivotra aorian'ny famerenany azy.
Aorian'ny fanitsiana voalohany ao amin'ny tsanganana ambany, ny rivotra misy rano sy ny azota madio dia azo angonina ao amin'ny tsanganana ambany. Ny azota azota sy fako ary ny azota madio dia mikoriana mankamin'ny tsanganana ambony amin'ny alàlan'ny rivotra mangatsiaka sy ny cooler azota azota. Ahitsy ao amin'ny tsanganana ambony indray izany, aorian'izany, ny oksizenina ranoka misy fahadiovana 99,6% dia azo angonina eo amin'ny farany ambany amin'ny tsanganana ambony, ary avoaka avy ao anaty boaty mangatsiaka ho famokarana.
Ny ampahany amin'ny ampahany argon ao amin'ny tsanganana ambony dia voatsindrona amin'ny tsanganana argon crude. Misy ampahany 2 amin'ny tsanganana argon crude. Ny reflux an'ny ampahany faharoa dia atolotra eo an-tampon'ny voalohany amin'ny alàlan'ny paompy misy rano toy ny reflux. Ahitsy ao amin'ny tsanganana argon crude hahazoana 98,5% Ar. 2ppm O2 crude argon. Avy eo atolotra eo afovoan'ny tsanganana argon madio amin'ny alàlan'ny evaporator. Aorian'ny fanitsiana amin'ny tsanganana argon madio, (99,999% Ar) ny argon ranon-javatra azo angonina eo amin'ny farany ambanin'ny tsanganana argon madio.
Ny azota fako avy eo an-tampon'ny tsanganana ambony dia mivoaka avy ao anaty boaty mangatsiaka mankany amin'ny fanadiovana ho rivotra miverina, ny fitsaharana dia mankany amin'ny tilikambo mangatsiaka.
Ny nitroka avy eo an-tampon'ny tsanganana mpanampy amin'ny tsanganana ambony dia mivoaka avy ao anaty boaty mangatsiaka toy ny famokarana amin'ny alàlan'ny exchanger hafanana sy hafanana lehibe. Raha tsy mila azota dia azo entina any amin'ny tilikambo fihenan'ny rano izany. Ho an'ny mangatsiaka dia tsy ampy ny tilikambo fanamafisana rano, mila apetraka chiller.
1 ： Air Compressor (piston na tsy misy menaka)
2 ： Fitaovana fanamafisana ny rivotra
3. Rafitra fanadiovana ny rivotra
4 ： Fiaramanidina
5 ： Misaraka amin'ny rano
6 ： Mpanadio sivana molekiola auto Auto PLC）
7 ： Sivana mazava tsara
8 ： Tsanganana fanarenana
10 ： Mpanadihady ny Fahadiovan'ny Oxygène
Previous: Mpanamboatra azo itokisana ho an'ny-famokarana-oksizenina-azota-azota-argon-famokarana
Manaraka: Ny zavamaniry oksizenina cryogenika dia mitaky famokarana oksizenina ranoka
Zavamaniry miteraka oxygen Nitrogen Argon Oxygen miteraka